MARA - Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co. Ltd.
Esi zere mmebi nke ngwongwo n'ihi winding fim nsogbu na lọjistik
Site na mmepụta, nkwakọ ngwaahịa, ngwa ngwa, na usoro arụmọrụ nke ngwaahịa, anyị na-etinyekwu ume na ngwaahịa na ngwugwu ha. Ya mere, anyị etinyeghị uche na njem, lọjistik na njikọ nkwakọ ngwaahịa, ọ fọkwara obere ka anyị nyefee ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ lọjistik ọrụ a. Otú ọ dị, dị ka ọnụ ọgụgụ dị mkpa si dị, n'ihi nkwakọ ngwaahịa na-ekwesịghị ekwesị, ọnụọgụ nke ngwongwo mebiri emebi na lọjistik na njikọ ụgbọ njem ruru 4%, ma a jụrụ nnukwu akụkụ nke ngwongwo ahụ. N'ime njem njem, ma ọ bụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ njem ala, ọnụọgụ nke njem pallet dị oke elu. Taa, anyị na-atụle otu esi egbochi mmebi nke ngwongwo ebugharị n'ihi ihe nkiri na-emechi emechi na pallet. Ya mere, ijide nkwụsi ike n'oge njem bụ isi, na nkwụsi ike pallet kachasị mma pụtara ibibi ibu ahụ, obere ihe ọghọm na ọnụ ahịa obere ego.
Nke mbu, jiri ihe eji emechi emechi
Usedzọ a na-ejikarị eme ka pallet dị na logistics bụ iji kechie pallet na ihe nkiri na-agbatị iji hụ na ngwongwo ndị a fụchiri nwere ike ịnọgide na pallet. N'oge usoro njem, ọsọ nke ngwa njem ga-emetụta ntụgharị nke ihe a fụchiri na pallet. Dịka ọmụmaatụ, na usoro njem ụgbọ ala, mgbe ụgbọ njem na-agba ọsọ ọsọ ma na-agbada ọsọ ọsọ, ọkachasị mgbe ọ kwụsịrị na mberede, ọ ga-ewepụta ngwa ngwa na mberede. N'oge a, pallet ga-ebu nnukwu ibu, ihe ruru 50% nke ibu ahụ. % Ọ bụrụ na njirimara nke ihe nkiri eserese ahọpụtara ezighi ezi ma ọ bụ ụdị ihe nkiri eserese na-ezighi ezi, ọ ga-emetụta nkwụsi ike nke ngwongwo na pallet, na ihe puru omume nke ukwuu ga-eme ka pallet tụgharịa ma mebie ngwongwo ahụ.
N'ozuzu, gbatịa gbatịrị film na-ekewa n'ime ntuziaka gbatia nkiri, tupu-gbatịa gbatịrị film na igwe gbatịrị film. Ihe gbasaa nke ihe nkiri eserese dị iche iche na ihe mkpuchi ndị ahụ ezubere iche dị nnọọ iche. Yabụ, ịhọrọ ezigbo ihe nkiri gbatịkwuru bụ mmesi obi ike maka nchekwa njem.
Nke abuo, nhọrọ ziri ezi nke gbatịa winding akụrụngwa
Họrọ ihe nkiri gbatịrị agbatị kwesịrị ịnwe igwe nkwakọ ngwaahịa ziri ezi iji kwekọọ na ya, na tupu igwe ahụ arụ ọrụ, ndị ọkachamara ọkachamara ga-edozi eserese nke igwe. Ọ bụ ezie na onye na-emepụta igwe ahụ maara akụrụngwa ahụ, n'ihi ọdịiche dị na ngwa ngwa nke eserese ahụ, onye nrụpụta akụrụngwa na-eji usoro ọkọlọtọ mgbe akụrụngwa ahụ hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ, ya bụ, mgbe a na-ekpuchi nkwakọ ngwaahịa ahụ, ihe nkiri ahụ gbatịrị agbatịghị n'otu oge. Ya mere, oru mkpara nwere ike ịtọ mkpa parameters adabara ụfọdụ nkwakọ chọrọ site na e ji mara nke ngwugwu na tree.
N'ikpeazụ, jiri usoro ikuku ziri ezi
Ihe ọzọ dị mkpa dị mkpa bụ na ejikọtara ibu ahụ na pallet. Yabụ, mgbe emechara ihe nkiri ahụ na-eyikwasị ngwongwo ahụ, ọ dị mkpa iji aka ya gbasaa ihe nkiri ahụ gbagoro iji mepụta eriri ihe nkiri, nke a na-emerụ ya na pallet. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ịgba mbọ hụ na ngwongwo ahụ kwụ ọtọ na pallet. Ebe ọ bụ na achọrọ ụdọ ihe nkiri ka ikuku wee dozie ngwongwo na pallet ahụ, igwe nkwakọ ngwaahịa enweghị ike ijikwa ya nke ọma. N'ime usoro nkwakọ ngwaahịa, achọrọ itinye aka na ntuziaka, mana njikọ a dị mkpa.
Dị ka a mkpa film ịme anwansị nwere ọgụgụ isi usoro usoro, akpụkpọ ahụ nwere ike na-ebuli ihe nkiri usoro na usoro dị ka dị iche iche oru chọrọ nke gbatia nkiri, na quantify arụmọrụ nke ọ bụla index nke ihe nkiri. Na-enyere gị aka ị nweta nkwakọ ngwaahịa pallet kachasị mma iji zere ịpị pallet na mbibi ibu n'oge njem.